छोरी भएकै कारणले बुवा आमाले मृगौला दिन मानेनन्, अन्तत : उनी याे संसार बाट विदा लिईन् !! – ताजा समाचार
छोरी भएकै कारणले बुवा आमाले मृगौला दिन मानेनन्, अन्तत : उनी याे संसार बाट विदा लिईन् !!
कञ्चन कुमारी । भारतको बिहारको शेखपुरामा बस्थिन् । १६ वर्षको उमेरमा बुधबार उनको मृत्यु भयो । उनको मृगौलाले काम गर्न बन्द गरेको थियो । उनको मृ*त्यु भयो किनभने उनी एक छोरी थिइन् । छोरा भएको भए सायद उनका अभिभावकले उनलाई बचाउन हरसम्भव प्रयास गर्दथे होलान् ।
कञ्न म्याट्रिककी विद्यार्थी थिइन् । यो वर्षको अन्मित परीक्षापछि अचानक बिरामी भइन् । पिता सदरले उनलाई सदर अस्पताल पुगे । त्यहाँ डाक्टरले उनको दुबै मृगौला खबर भइसकेको बताए ।
त्यसपछि उनलाई पटनाको इन्दिरा गान्धी इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्समा पनि भर्ना गरियो । त्यहाँ डाक्टरले कञ्चनलाई तत्काल मृगौलाको आवश्यकता भएको बताए । यस्तो नहुने हो भने उनी नबाँच्ने निश्चित भएको पनि बताए । यति सुनेपछि उनका आमा–बुवाले भने, ‘छोरी हो, यसलाई कसले मृगौला दिन्छ ?’
आमा–बुवाले मृगौला दिन अस्विकार गरेपछि गौतम प्रसाद नामका एक व्यक्तिले दिने बताए । तर शल्यक्रियाका लागि पाँच लाख भारु खर्च हुने र बाँच्ने कुनै निश्चित नभएको भनेपछि आफूहरु निकै गरिब भएको र उपचार गराउन नसक्ने बताए ।
आमा–बुवाले उनलाई अस्पतालबाट घर लिएर गए जहाँ उनको स्वास्थ्य थप बिग्रियो ।
रिपोर्टका अनुसार बालिकाका आमा–बुवासँग आयुष्मान भारत योजना कार्ड पनि थियो । तर उनीहरुले कार्डमार्फत् उपचारमा सहयोग वा कुनै अन्य सरकारी मद्दतका लागि कुनै निवेदन नदिएको बताइएको छ । ३१ जुलाई बिहान कञ्चनको मृ*त्यु भयो ।
‘छोरी हो पढेर के गर्छे, छोरी हो कलेज गएर के गर्छे, छोरीको पराइको धन हो, उमाथि पैसा खर्च गर्नुको के फाइदा, छोरी बलिया हुन्छन् औषधी नखाएपनि ठिक हुन्छन्,’ यी त्यस्ता शब्द हुन् जुन हामीले धेरैजसो सुनिरहेका हुन्छौं ।
छोरी भएर संसारमा जिउँदो जन्मनु र संसार देख्न पाउनु नै पहिलो चुनौती हो । त्यसपछि पनि विभिन्न चुनौतीले छोरीको प्रतिक्षा गरिरहेको हुन्छ । पेटभरी खानेदेखि शिक्षा, जागिर, विवाह, घर र उनको मृत्यु नभएसम्म उनलाई महिला र कमजोर भएको महसुस गराइन्छ ।
कञ्चन थप पढ्न चाहन्थिन् होला, केही सपना थियो होला, आफ्नो खुट्टामा उभिन चाहन्थिन् होला । तर महिला भएकै कारण उनको अस्तित्व हल्का भयो । उनले यसको मूल्य आफ्नो ज्या*न दिएर तिर्नुपर्यो ।